Wado Duntay Oo Qasaare Dhimasho Iyo Dhaawacba Leh Gaysatay – Heemaal News Network
Wado Duntay Oo Qasaare Dhimasho Iyo Dhaawacba Leh Gaysatay
Ugu yaraan 18 ruux ayaa ku dhimatay dadkale oo baddana way ku hoos xannibmeen ka dib markii ay waddo dhulka ka sarraysa ku duntay magaalada Varanasi ee dalka Hindiya, iyadoo ku habsatay baabuur hoos maraysay.
Waddada ayuu wali dhisme ku socday markii ay qayb ka mid ah duntay, waxaana furnayd oo gawaaridu adeegsanayeen waddo kale oo hoos marta.
Shaqaale ka socda gurmadka degdegga ah ayaa sheegay in ilaa iyo hadda la helay 18 ruux oo mayd ah.
Waxaa socda gurmad lagu baadigoobayo dadka wali la rumaysan yahay in ay ku hoos jiraan gawaarida, balse tiradooda iyo xaaladda ay ku sugan yihiin ayaan wali war laga haynin.
Sawirro iyo muuqaallo laga qaaday dhacdadan ayaa muujinaya gawaari iyo bas ku hoos xaniban burburka oo ay dad ku jiraan.
Warbaahinta gudahu waxay ku warramaysaa in tiro dad ah la badbaadiyay iyaga oo badqaba, iyadoo toddobo wiish ay daabuleen qaar ka mid ah shubabkii soo dumay. Dad badan ayaa sidoo kale isugu soo arruuray goobtaas.
Qaar ka mid ah goob joogeyaasha ayaa saxafiyiinta u sheegay in ay ka ag dhawaayeen marka ay waddadu dumaysay, “ugu yaraan afar gaari, hal bajaaj iyo bas yar ayay waddadu ku duntay” ayay dhaheen.
Shacabka Jubboyinka: Axmed Madoobe Uma Dhalan Gobolka Ee Ha Na Dhaafo Ama Dagaal Ha U Diyaar Garoobo
Amisom Oo Loo Kordhiyey Waqtiga Ay Sii Joogayaan Soomaliya
Dowlada Hindiya Oo ku Biirtay Xasuuqa Lagu Hayo Muslimiinta Rohingya.
September 25, 2017 Caalamka
Gudaha Myanmar, ma aha goob laga jecelyahay Dadka qowmiyadda Rohingya, waxaana loo diiday dhalasahada dalkaasi,,sidoo kale dibadda inta badan kuma laha saaxib. Dowlada Hindiya ayaa hadda sheegtay in dadka Rohingya ee ku nool dalkeeda ay […]
Labo Xidig Oo Caan ka ah Hindiya Oo Is Mehersaday.
December 13, 2017 Caalamka
Kabtanka xulka Kiriketka Hindiya Virat Kohli iyo atariishada caanka ah Anushka Sharma ayaa isku mehersaday dalka Talyaaniga, ka dib toddobaadyo la isla dhexmarayay in ay is aroosayaan. “Maanta waxaan isu ballan qaadnay in aan waligana […]